China Pallet Racking System Nlụpụta na Factory | Huade
Pallet racking bụ usoro ihe eji eji ihe eji echekwa ihe iji chekwaa ihe ndị nwere palletized. E nwere ọtụtụ ụdị nke pallet racking, nhọrọ nhọrọ bụ ụdị kachasị, nke na-enye ohere maka ịchekwa ihe ndị palletized na ahịrị kwụ na ọtụtụ ọkwa.
Pallet racking bụ usoro ihe eji eji ihe eji echekwa ihe iji chekwaa ihe ndị nwere palletized. E nwere ọtụtụ ụdị nke pallet racking, nhọrọ nhọrọ bụ ụdị kachasị, nke na-enye ohere maka ịchekwa ihe ndị palletized na ahịrị kwụ na ọtụtụ ọkwa. A na-achọkarị ụgbọala forklift ka ọ dọba pallets ndị a dọlitere n'elu racks maka nchekwa. Pallet racks aghọwo ihe a ma ama nke ọtụtụ ụlọ nkwakọba ihe nke oge a, ụlọ ọrụ mmepụta ihe, nnukwu ụlọ ahịa, na ebe nchekwa na nkesa ndị ọzọ. Typesdị pallet niile na-abawanye njupụta nchekwa nke ngwongwo echekwara. Ọnụ ego metụtara racking na-abawanye na njupụta nchekwa nchekwa.
Nhọrọ nhọrọ pallet na-ahọrọ bụ nke kachasị dị iche iche, usoro a ma ama na ahịa. Inye ohere maka forklifts na pallet ọ bụla, yana ijikọ waya, nkwado mmanya ma ọ bụ ogologo pan pan, pallet racking bụ ngwọta kachasị mma maka ụlọ nkwakọba ihe nwere ọtụtụ ngwaahịa na pallets. A na-ahazi ihe ndị dị elu, ogologo ogologo na obosara wara wara na forklifts, pallet nha na akụkụ nke ụlọ nkwakọba ihe, na ihe owuwu a nwere ike ịgbasa.
Akụkụ ndị a na-ahụkarị nke sistemụ pallet:
Ibu ibu dị ka nzọ ụkwụ ma ọ bụ ogwe igbe Okpokolo agba
Ihe nkwado diagonal na nkwado kwụ ọtọ Pallet na-akwado
Waya decking Pkwụ ụkwụ
Shim efere Ahịrị spacers
Kọlụlụ na-echebe ya Ndị nche ụgbọ mmiri
Uru nke pallet racking:
Na-agbasa ngwa ngwa
Mgbanwe maka ụdị ibu dị iche iche, ntụgharị ibu na olu
Ikpokọta na ogologo na-adịru na shelf maka iji aka buru ibu
Enwere ike itinye racks nwere okpukpu abụọ (4 pallets azụ na azụ karịa 2) iji mee ka ikike nchekwa ahụ dịkwuo elu
Nnọọ wara wara wara wara wara usoro doo wara wara wara wara maka pụrụ iche forklifts, na-amụba njupụta nchekwa
Huade pallet racks na-mere si ika elu-ike ígwè nke pụtara na ihe owuwu bụ siri ike, a pụrụ ịdabere na nchebe. Obere pallet racks abụwo otu n'ime akụkụ ọkachamara nke Huade.
Anyị racking ọkachamara ga-arụ ọrụ na ị họrọ kacha mma nchekwa ngwọta na-akwado gị mgbe niile site niile n'ụzọ nke oru ngo.
Nke gara aga: Suttle Racking Sistemụ
Osote: Kantilever ogbe